Khawucinge nje: i-disco, ukukhanya okungahambi kakuhle, umculo womculo. Kwaye ubonakala Yena: ngokukuthabatha kukuthabatha ngesandla, ubhekise emehlweni akho kwaye ... ngokukhawuleza uvakalisa ukuba uyisiphephelo sakhe, ukuba wayelokhu elindele intombazana enjalo kwaye amehlo akho aphuphayo amphupha kusukela ebuntwaneni. Ukulumkisa: mhlawumbi akuyiyo inkosana, yinto eqhelekileyo yokuthabatha!
Ukunyuka (ukusuka e-Australia ukuthabatha - "thabatha") - umfana ohlala ekwazi amantombazana ahlukeneyo, ngelixa enenjongo engekho. Injongo yaso ephambili kukukhawuleza loo ntombazana ngokukhawuleza okanye mhlawumbi xa unobungozi bamba inombolo yefowuni ngaphandle kokuchitha imali kuyo (oku kubaluleke kakhulu kubo: iindleko zithathwa njengefomu elibi). Iipok-up zihlala ziza kwaye zisebenzise iindlela ezahlukeneyo zokuthandana kunye nokuthandana kwamantombazana, ngamnye kubo unamaqela abo, iiwebhusayithi kunye nezifundo ezizodwa. Njengamaxesha onke, uhlamvu lwemali lunamacala amabini. Ngokuqinisekileyo, kukho abantu abathobekileyo abaye baqeqesha ngokuthe ngqo ukuba bafunde indlela yokuzithemba ngakumbi wena nokwakha ubuhlobo kunye nentanda yakho. Kodwa ngokuphindaphindiweyo ukuhamba rhoqo kwamaqela okupakisha - abafana abangazange bafunde ngokucokisekileyo izinto ezisiseko zeengqondo zentombi, baqhelane neqela leentombazana kanye kunye neentloko ezihlwempuzekileyo. Kwaye emva koko, kunye nabahlobo ngoku, qhathanisa "ukubamba" kwaye ubeke amanqaku kwizinga leshumi.
Ulawulo lunemizuzwana eyi-10.
Abapikapers banomthetho ongabonakaliyo: ukuba ufuna ukumazana nentombazana, kufuneka ufike kuye kwimizuzwana eyi-10, njani le ngcamango yafika engqondweni, mhlawumbi into ingaphazamisa, kwaye akukho nto iya kuphuma. Ngoko ukuba ngokukhawuleza uqaphele umntu ongaziwayo kwi-disco, othe wangena ngokukhawuleza, wakhawuleza wakhangeleza kwaye wuleza waya kuwe, ngoko uqaphele ngakumbi-mhlawumbi kukho into engcolileyo.
Amagama amahle amnandi nangona intombazana ethembekileyo, kodwa i-picketers inezincomo zisoloko zisekuqaleni. I-Handsome ikuxelela malunga "nombala wombala wefrifu yasekuseni" kunye "nesikhumba esivuthayo kunabakhandi baseNyu-York"? Kungenzeka ukuba, akunandaba naye ukuba uyakholelwa okanye awukho. Ufuna ukuba umkhumbule.
Lo mqondo uthetha "ukulungiswa" kwindlela yokuziphatha. Kukholelwa ukuba kulula kakhulu ukuba umntu abe khona kuye, ukuba nje uqale ukumbonisa into encinane: uthetha ngegama elifanayo, vuka kwindawo efanayo. Inkwenkwezi enkulu kakhulu iqala ngokukhawuleza, ngokukhawuleza ukuhlebaza, kunye nomfana kunye nesenzo esivamile - ukutshangqa iingalo zakhe, igama lokugaya? Khangela, ngubani abo bathi: mhlawumbi, ezi zinto azikho imikhwa yabo.
I-Pikaperu ayinomdla kwinyanga ukuthetha nawe kwifowuni, uya kuzama ngokukhawuleza ukuhamba kwimisebenzi esebenzayo-ukumema ukutyelela ngokuhlala ubusuku okanye ukucela. Inokwenzeka ukuba, uya kubakhokelela, akhuthaze kwaye uya kukuthembisa ulonwabo ngonaphakade kunye neparadesi yangempela emhlabeni. Yikholwa okanye awuyiyo - ishishini lakho, kodwa khumbula engqondweni yakho: akunakwenzeka ukuba uyibone kwakhona.
Le yiCasanova .
Kwanele nje ukumhlekisa ngaye. I-Real Casanova - isikratshi sokugula, uyasicasula nakwizinto ezintle ezingenangxaki.
Uyazi ngokwenene indlela yokuwa ngothando. Ngokuqhelekileyo. Phantse kanye ngeveki. Yaye yonke intombazana iyavuma. Ukuba akukho mntu ebomini bam adibana naye. Into enokuyenza: kukho abantu abanjalo, kuba amantombazana ayimisebenzi yobugcisa. Namhlanje uyancoma, kwaye ngomso uye wayelumkela umngane wakho. Ngokuqhelekileyo bahlobo abahle kakhulu: abanyanisekileyo nabanobubele. Kodwa isithandwa esivela kumfana onjalo asinakwenzeka ukuphumelela - kuphela ukuba iintsuku ezimbalwa.
Amakhwenkwe angaphazamanga azama ukujwayelana nomntu wonke ukuze azive epholile. Aba bantu abazi ukuba bangakha njani ubudlelwane obuqhelekileyo, kodwa abayifumanga. Bathanda ukubonisa abahlobo, baxoxe (okanye bavele nje) baxhaphaze baze bahlekise i-naivete yamantombazana. Kungcono ukuphepha umfazi onjalo. Kutheni kubangela ukuzithemba nokuzihlambalaza?
Iindaba ezilungileyo: abanye abantu bafuna ukufumana umlingane ophelileyo. Kunzima - uyazi. Ngoko basebenzisa indlela yokugada baze bahlale benothando lokwenene. AKUKHO ninyanisekile, eneneni, kodwa unokwenza ntoni. Chaza nje ngokukhawuleza ukuba awuyi kubelana kunye nesihlwele samantombazana - kwaye makhethi akhethe okubaluleke kakhulu kuye.
Ngaba ufumene i-pick-up?
Ngokuqinisekileyo uthi "Umntu wam u-pick-up!"? Kwaye mhlawumbi, umntu obonakala ngathi ungumkhohlisi onobuqhetseba, ngokwenene ungumfana onomdla kwaye onomdla? Musa ukuthatha izigqibo ezikhawulezileyo: uthethe ngokunyanisekileyo, chaza oko kukubonileyo. Ukuba uyintanda kumntu, akayi kukhwankqiswa-kakuhle, uhlamba, nje ixesha elincinane. Ngokukhawuleza zonke zakho izikrokra zibonakalisa iimpawu zeparanoia?
Hlela. Akukho nto izama ukutshintsha iphepha langempela, awukwazi ukubeka umfanekiso wakho wehlabathi entloko yakhe. Kuwe, uthando aluwona umdlalo, kodwa uhlukile kuye. Ukuba uyaqonda ukuba ngaphezu kwakho unesixuku "sofana" kunye "neengelosi," kungcono ukuyeka ukuthetha. Mna ubiza kakhulu.
Musa ukuzigxeka. Yintoni ephosakeleyo ngokukholelwa kuye? Le ngxaki yakhe - akayiqondi ukuba kukho izinto ezibaluleke ngaphezu kweluhlu lokunqoba. Kwaye ulungile, akunanto inenhlanhla: ujongene nohlobo olungathandekiyo. Musa ukucinga ukuba bonke abafana bahamba phambili, kwaye nguwe olahlekileyo kakhulu emhlabeni. Kwaye ke uya kuphinda ujabule ulonwabo.
Zi nwabisa. Ufuna ixesha lokufumana kwakhona, kwaye uya kujonga ibali lonke. Yenza ibe yi-anecdote, uhlekise kunye neentombi zakho. Ekugqibeleni, uhamba ebomini nentloko yakho ibanjwe phezulu, kwaye lo mntu ulahlekile uyaqhubeka ekugxotha bonke abantu, enethemba lokuba ubuncinci apho angayi kunqatshwa khona. Into engeyona nto.
Kwifilosofi yabaculi be-pick-up, kungekhona into embi kakhulu: into enceda ukuba ufunde. Ngokomzekelo, ukuzithemba-ubuncinci kwinto yokuba uyazi ngaphandle kokuthuthumela emadolweni kwaye kungengomngqungquthela owamanqaku amasha. Kwaye bafunda ezininzi iincwadi kwizengqondo kwaye banako ukufumana ulwimi oluqhelekileyo nangona abantu abahoxisiwe kakhulu. Kwaye banomdla ocebileyo, baqeqeshelwa ukuxhasa. Kwaye kubaluleke kakhulu - ulwazi lolwazi kunye neendlela zokusebenzisa iipikaperskie zingasetyenziswanga kuphela kwi-love front. Indlela efanelekileyo yokufumana abahlobo, abazali kunye nootitshala okanye iinkokeli zinikezelwa.
Yintoni enokuyenza xa indoda ingayifuni umntwana
Kutheni amadoda ehamba?
Ukusuka kubani abafazi abangahambi ngamadoda
Imigaqo eyisiseko yokunxibelelana namadoda
U-Olga Buzova wabuya wamangalisa wonke umntu
Iintyatyambo zangaphakathi: lisianthus
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - umdlavuza wesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Ukukhetha iimpahla zentsana entwasahlobo
Eyona nto imnandi iyayincoma ngomtshato kwivesi kunye neprose
Amabala obomvu emzimbeni: ezibangela